ch 27 မဿဲ – 2ငါးကို
မူလစာမျက်နှာ / သမ်မာကမျြး / မဿဲခရစ်ဝင်ကျမ်း / ch 27 မဿဲ
27:1 ထိုအခါ, နံနက်ရောက်လာတဲ့အခါ, လူအပေါင်းတို့သည်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်လူမျိုး၏အကွီးအကဲမြားသညျယရှေုဆန့်ကျင်တိုင်ပင်ပြီး, ဒါကြောင့်သူတို့ကအသေခံဖို့သူ့ကိုကယ်နှုတ်တော်မူအံ့သောငှါ.
27:2 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုဦးဆောင်, ဘောင်း, နှင့်ပုန္တိပိလတ်သူ့ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်, ဝယ်ယူရေး.
27:3 ထိုအခါယုဒ, အဘယ်သူသည်သူ့ကိုသစ္စာဖောက်, သူကပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ကြသည်ကိုသိမြင်လျှင်, မိမိအမူအကျင့်ရင်းစိတ်မကောင်း, ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်အကွီးအကဲမြားအားငွေသုံးဆယ်ကိုပြန်ယူဆောင်,
27:4 ဟုဆို, "ငါသည်။ ရုံအသှေးကိုသစ္စာဖောက်ပြီးအတွက်ပြစ်မှားပါပြီ" ဒါပေမဲ့သူတို့ကလညျး: "ကိုကဘာလဲ? အဲဒါကိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည့်ပါ။ "
27:5 ထိုအခါဗိမာန်တော်၌ထိုငွေကိုအပိုင်းပိုင်းလှဲ ချ. ဘေး, သူကထွက်သွားကြ. ထိုအထွက်, သူကတစ်ဦးကျော့ကွင်းနှင့်အတူမိမိကိုမိမိဆွဲထား.
27:6 သို့သော်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များ, ငွေကိုအပိုင်းပိုင်းအထိ ယူ., ကပြောပါတယ်, "ဒါဟာဗိမာနျတျောဟာယပူဇော်သက္ကာသို့သူတို့ကိုငါထားရန်အပ်မ, ကသွေး၏စျေးနှုန်းဖြစ်သောကြောင့်။ "
27:7 ထိုအခါ, ဆုံးမစကားကို ယူ., သူတို့ကအတူအိုးထိန်းသမား၏လယ်ဝယ်, ဧည့်များအတွက်မြှုပ်ရာအရပ်ကဲ့သို့.
27:8 ဒီအတွက်ကြောင့်, ကြောင်းလယ်ပြင် Haceldama ဟုခေါ်သည်, ကြောင်း, သွေး၏ '' အဆိုပါဖျော်ဖြေမှု,'' ပင်ယနေ့တိုင်အောင်.
27:9 ထိုအခါအဘယျသို့ယေရမိကိုပွညျ့စုံခဲ့ညျပရောဖကျခွငျးအားဖွငျ့မိနျ့တျောမူခဲ့သညျ, ဟုဆို, "ထိုသူတို့ကငွေအသုံးဆယ်ကို ယူ. ,, တ၏စျေးနှုန်းတန်ဖိုးဖြတ်ခံရ, ဣသရေလအမျိုး၏သားတို့ရှေ့မှာတန်ဖိုးဖြတ်တော်မူသော,
27:10 သူတို့အိုးထိန်းသမား၏လယ်များအတွက်ပေးသော်လည်း, ထာဝရဘုရားသည်ငါ့ကိုမှခန့်အပ်ထားသောနည်းတူ။ "
27:11 အခုဆိုရင်ယရှေုသညျဝယ်ယူရေးရှေ့မှာရပ်, နှင့်ဝယ်ယူရေးသူ့ကိုမေးခွန်းထုတ်, ဟုဆို, "သင်တို့သည်ယုဒရှင်ဘုရင်တွေဟာ?"ယရှေုကလညျး, "သင်နိုင်အောင်ပြောနေနေကြတယ်။ "
27:12 ထိုမင်းသည်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်အကွီးအကဲမြားအားဖြင့်စွပ်စွဲခံခဲ့ရသည့်အခါ, သူဘာမျှမတုန့်ပြန်.
27:13 ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်ကလညျး, သင်သည်သူတို့သင်တို့တဘက်၌မပြောတတ်ဘယ်လောက်သက်သေခံချက် "နားမထောင်ပါနဲ့?"
27:14 ထိုမင်းသည်အထံတော်သို့မဆိုစကားလုံးကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပါဘူး, ဝယ်ယူရေးကိုအလွန်အံ့ဩဒါ.
27:15 အခုတော့ဓမ္မနေ့၌, ဝယ်ယူရေးလူတဦးတည်းအကျဉ်းသားလွှတ်မြဲထုံးစံရှိ၏, အကြင်သူ၏သူတို့စေလိုကြောင်း.
27:16 ထိုအချိန်က, သူဟာနာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသောအကျဉ်းခံခဲ့, ဗာရဗ္ဗအမည်ရှိသော.
27:17 ထို့ကြောင့်, စုဝေးလခံတော်မူပြီးမှ, ပိလတ်မင်းသည်ထိုသူတို့အားပြောဆို, "သင်သင်တို့အားငါလွှတ်စေချင်ကြောင်းသူကဘယ်သူလဲ: ဗာရဗ္ဗ, သို့မဟုတျယရှေု, ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သော?"
27:19 သို့သော်သူသည်ခုံရုံးအဘို့အရပျ၌ထိုင်နေစဉ်အဖြစ်, သူ၏ဇနီးအထံတော်သို့စေလွှတ်သ, ဟုဆို: "ဒါဟာသငျသညျမှအချည်းနှီးဖြစ်၏, သူပဲဖြစ်ပါတယ်. ငါသည်သူ၏မျက်နှာကို ထောက်. မှာဗျာဒိတ်ရူပါရုံကိုမှတဆင့်ယနေ့အရာများစွာကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြသည်။ "
27:20 သို့သော်ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များနှင့်အကွီးအကဲမြားကိုလူဖျောင်းဖျ, သူတို့ဗာရဗ္ဗကိုတောင်းမည်ဟုဒါ, ဒါသညျယရှေုပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်လိမ့်မယ်လို့.
27:21 ထိုအခါ, တုန့်ပြန်, ဝယ်ယူရေးကလညျး, "နှစ်ခု၏ဘယ်သင်တို့ဆီသို့ဖြန့်ချိခံရဖို့သင်အလိုရှိကြဘူး?"ဒါပေမဲ့သူတို့ကလညျး, "ဗာရဗ္ဗ။ "
27:22 ပိလတ်မင်းသည်ထိုသူတို့အားပြောဆို, "ထိုအခါငါယေရှုအကြောင်းအဘယ်သို့ပြုရမည်, ခရစ်ဟုခေါ်ဝေါ်သော?ကပြောသည် "သူတို့အားလုံး, "သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားစေကြလော့။ "
27:23 ဝယ်ယူရေးကလညျး, "ဒါပေမယ့်အဘယ်အပြစ်ပြုမိ?"ဒါပေမဲ့သူတို့ကလူအပေါင်းတို့သည် သာ. ဟစျကျွော, ဟုဆို, "သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားစေကြလော့။ "
27:24 ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်, သူဘာမျှမပြီးမြောက်နိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုမြင်လျှင်, ဒါပေမယ့် သာ. ကြီးမြတ်အသံဗလံဖြစ်ပေါ်ခဲ့, ရေတာ, လူအများ၏ရှေ့မှောက်၌မိမိလက်ကိုဆေးကြော, ဟုဆို: "ကျွန်မဒီ၏အသွေးကိုအပြစ်မဲ့ဖြစ်ကြောင်းကိုရုံလူကို. အဲဒါကိုကိုယ်အဘို့ကိုယ်ကိုကြည့်ပါ။ "
27:25 ထိုအခါတစျခုလုံးကိုလူတွေပြောနေသဖြင့်တုန့်ပြန်, "မိမိအသွေးအကြှနျုပျတို့အပျေါနှင့်ငါတို့သားသမီးများအပေါ်သို့ဖြစ်နိုင်ပါစေ။ "
27:26 ထို့နောက်သူကသူတို့ကိုဗာရဗ္ဗဖြန့်ချိ. သို့သျောယရှေု, ရိုက်ခံတော်မူပြီးမှ, သူကသူတို့ကိုလွှဲပြောင်းပေးအပ်, သူကလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံရမည်ဟုဒါ.
27:27 ထိုအခါဝယ်ယူရေး၏စစ်သားများက, အိမျတျောဦးမှတက်သညျယရှေုကိုယူပြီး, သူ့ကိုန်းကျင်တစ်ခုလုံး၌စုရုံးစေပြီးမှ.
27:28 သူ့ကိုချွတ်ပြီး, သူတို့ကသူ့ကိုလှည့်ပတ်နေတဲ့ကတ္တီပါနီရင်ခွင်ထား.
27:29 နှင့်ဆူးပင်တစ်ပန်းဦးရစ်သရဖူကို plaiting, သူတို့သူ၏ခေါင်းပေါ်၌ထားရှိ, လက်ျာလက်၌ကျူပင်နှင့်အတူ. သူ့ရှေ့မှာ genuflecting, သူတို့ကသူ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံ, ဟုဆို, "မင်ျဂ, ယုဒလူတို့ကိုဘုရင်ဖြစ်တော်မူ၏။ "
27:30 နှင့်တံထွေးထွေးခြင်းသူ့ကိုအပေါ်, သူတို့ကကျူပင်ကို ယူ. သူ၏ဦးခေါင်းကိုဒဏ်ခတ်.
27:31 ထိုသူတို့ကသူ့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုခြင်းကိုခံပြီးမှ, သူတို့ရင်ခွင်သူ့ကိုချွတ်, မိမိအဝတ်ကိုသူ့ကိုအဝတ်ကိုဝတ်, သူတို့ကသူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားဖို့သူ့ကိုကွာဦးဆောင်.
27:32 ဒါပေမဲ့သူတို့ကထွက်သွားခဲ့ကြသည်အဖြစ်, သူတို့ကုရေနေပြည်သားယောက်ျားသည်အပေါ်မှာသက် ရောက်., ရှိမုန်အမည်ရှိ, သူတို့မိမိလက်ဝါးကပ်တိုင်ကိုတက်ယူအနိုင်အထက်အဘယ်သူကို.
27:33 ထိုသူတို့ကအရပ် ဟူ. တွင်သောအရပ်တွင်ရောက်ရှိ, ကရာနီ၏အရပျအရာဖြစ်ပါသည်.
27:34 ထိုသူတို့ကသောက်မှသူ့ကိုစပျစ်ရည်ကိုပေးခဲ့တယ်, သည်းခြေနှင့်အတူရောနှော. သူကမြည်းစမ်းခဲ့ကြရသောအခါ, သူသောက်ရန်ငြင်းဆန်.
27:35 ထိုအခါ, သူတို့ကသူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာရိုက်ထားပြီးမှ, သူတို့သည်မိမိအဝတ်ကိုခှဲဝေ, စာရေးတံ ချ., ပရောဖကျခွငျးအားဖွငျ့မိနျ့တျောမူခဲ့သညျအဘယျသို့ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်အတွက်, ဟုဆို: "သူတို့ကသူတို့တွင်ငါ့အဝတ်ကိုခှဲဝေ, နှင့်ငါ့အဝတ်ကိုကျော်သူတို့ကစာရေးတံချ။ "
27:36 နှင့်ထိုင်, သူတို့ကသူ့ကိုကြည့်ရှုလေ့လာ.
27:37 ထိုသူတို့ကမိမိခေါင်းကိုအထက်ကသူ့စွပ်စွဲသတ်မှတ်ထား, အဖြစ်စာဖြင့်ရေးသား: ဒီနည်းကိုယေရှု IS, ယုဒရှင်ဘုရင်.
27:38 ထိုအခါနှစ်ဦးကိုဓားပြယျတျောနှငျ့အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခဲ့ကြ: ညာဘက်အပေါ်တဦးတည်းနှင့်လက်ဝဲဘက်အပေါ်တဦးတည်း.
27:39 သို့သော်အားဖြင့်ဖြတ်သန်းသူတို့အားသူ့ကိုကဲ့ရဲ့, မိမိတို့ခေါင်းပေါ်လှုပ်,
27:40 ဟု: "Ah က, ဒါကြောင့်သင်ဘုရားသခင်၏ဗိမာန်တော်ဖျက်ဆီးပြီးသုံးရက်တှငျတညျဆောမယ်လို့! သင့်ကိုယ်ပိုင်မိမိကိုယ်ကို Save. သငျသညျဘုရားသခငျ၏သားတော်မှန်လျှင်, လက်ဝါးကပ်တိုင်မှဆင်း။ "
27:41 နှင့်အလားတူ, ယဇ်ပုရောဟိတ်၏ခေါင်းဆောင်များ, ကျမ်းပြုဆရာနှင့်အသက်ကြီးသူတို့နှင့်အတူ, သူ့ကိုကျီစယ်, ကပြောပါတယ်:
27:42 "သူကအခြားသူများကိုကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရ၏; သူကမိမိကိုယျကိုမကယျတငျနိုငျ. သူသည်ဣသရေလအမျိုး၏ရှင်ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်, သူ့ကိုလက်ဝါးကပ်တိုင်မှယခုဆင်းပါစေ, ကျနော်တို့ကသူ့ကိုယုံကြည်ပါလိမ့်မယ်.
27:43 သူသညျဘုရားသခငျကိုကိုးစား; ဒါကြောင့်ယခု, ဘုရားသခင်သည်သူ့ကိုလွတ်မြောက်ပါစေ, သူကသူ့ကိုအလိုတော်ရှိလျှင်. ဟုသူကပြောသည်များအတွက်, '' ငါသည်ဘုရားသခင်၏သားတော်ဖြစ်၏။ " '
27:44 ထိုအခါ, သူနှင့်အတူလက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခဲ့ကြသူဓားပြလည်းအလွန်အတူတူပါပဲနှငျ့အတူသူ့ကိုကဲ့ရဲ့.
27:45 ယခုဆဌမနာရီကနေ, တစ်ခုလုံးမြေကြီးပေါ်မှာမှောင်မိုက်ကိုရှိခဲ့သည်, ပင်နဝမအခြိနျတိုငျအောငျ.
27:46 ထိုအခါနဝမနာရီအကြောင်းကို, ယေရှုသည်ကြီးသောအသံနှင့်ဟစ်, ဟုဆို: "ဧလိ, ဧလိ, lama sabachtháni?"သောကွောငျ့ဖွစျသညျ, "ဘုရားရေ, ဘုရားရေ, သင်သည်အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုစွန့်ပစ်ကြပြီ?"
27:47 ရပ်နေခဲ့ကြသည်နှင့်အရှိပြောသည်ကိုနားထောငျသူမြားထိုအခါအချို့သောသူတွေကို, "ဤသူသည်ဧလိယကိုအပေါ်သို့ရန်တောင်းဆိုလိုက်သည်။ "
27:48 ထိုအခါသူတို့ကိုတ်, လျင်မြန်စွာပြေး, ရေမှိုတထွေးကို ယူ. ပုံးရည်နှင့်ပြည့်စေ, သူကျူပင်ပေါ်မှာသတ်မှတ်ထားသူသောက်သူ့ကိုအားပေး၏.
27:49 သို့သျောလညျးကိုအမှန်တကယ်, တခြားသူတွေကပြောပါတယ်, "စောင့်ပါ. ကျွန်တော်တို့ကိုဧလိယသည်သူ့ကိုလွတ်မြောက်မှလာကြလိမ့်မည်ရှိမရှိကြည့်ပါစေ။ "
27:50 ထိုအခါယေရှုသည်, ကြီးသောအသံနှင့်တဖန်ကြွေးကြော်, သူ၏အသက်တာအပ်.
27:51 ထိုအခါ, ဗိမာနျတျော၏ကုလားကာအပိုင်းနှစ်ပိုင်းသို့ကိုက်ခဲ့သည်, အထက်မှအောက်သို့. ထိုအခါမြေကြီးတပြင်လှုပ်ခဲ့သည်, နှင့်ကျောက်တုံးများကွဲခဲ့ကြ.
27:52 ထိုအခါသင်္ချိုင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြသည်. သန့်ရှင်းသူတို့နှင့်များစွာသောအသေကောင်, အိပ်ပျော်နေသောခဲ့သော, သညျထ.
27:53 ထိုအခါသင်္ချိုင်းတော်မှထွက်မယ့်, ထမြောက်တော်မူပြီးနောက်, သူတို့ကသန့်ရှင်းသောမြို့တော်သို့သွားလေ၏, သူတို့အများအပြားအားထငျရှား.
27:54 အခုတော့တပ်မှူးနှင့်သူ၌ပါသောသူတို့သ, ယရှေုသညျစောငျ့, အဆိုပါငလျင်နှင့်ပြုမိသောအမှုအရာကိုတှေ့မွငျပွီး, အလွန်ကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့ကြသည်, ဟုဆို: "အမှန်ဆိုသည်ကား,, ဒီဘုရားသခငျ၏သားတျောဖွစျ၏။ "
27:55 ထိုအရပျ၌, များစွာသောမိန်းမရှိကြ၏, အကွာအဝေးမှာ, ဂါလိလဲပြည်ကနေသညျယရှေုနောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သူ, သူ့ကိုအမှုတော်ကိုဆောင်ရွက်.
27:56 ယင်းတို့အနက်မာရိသညျဂဒလမာနှင့်မာရိယာကုပျနှငျ့ယောသပ်၏မိခင်ခဲ့ကြသည်, နှင့်ဇေဗေဒဲ၏သားတို့၏အမိ.
27:57 ထိုအခါ, ညဦးယံအချိန်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးမှ, ရိမသဲမြို့သားထဲကအချို့ချမ်းသာကြွယ်ဝသောသူသည်, ယောသပ်အမည်ရှိ, ရောက်ရှိ, သူကိုကိုယ်တော်တိုင်လည်းယေရှု၏တပည့်ခဲ့.
27:58 ဤသူသညျပိလတ်မင်းသည်ချဉ်းကပ်နဲ့ယေရှု၏အလောင်းတော်ကိုတောင်း. ထိုအခါပိလတ်မင်းသည်အလောင်းတော်ကိုဖြန့်ချိခံရဖို့အမိန့်ထုတ်.
27:59 ယောသပ်သည်, ခန္ဓာကိုယ်ယူပြီး, စင်ကြယ်ထု-ယက်ပိတ်ချောပတ်ရစ်ပြီးလျှင်,
27:60 မိမိသင်္ချိုင်းတွင်းသစ်ထဲမှာနေရာချ, ပေးသောသူတစ်ဦးကျောက်ထဲကထှ. သူသည်ထိုအသင်္ချိုင်းတံခါးမှကြီးစွာသောကျောက်ရှင်းပြီ, သူသညျသှား.
27:61 အခုတော့မာရိသညျဂဒလမာနှင့်အခြားသောမာရိသည်ရှိကြ၏, သင်္ချိုင်းတော်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ထိုင်လျက်.
27:62 ထိုအခါနောက်နေ့, အဆိုပါအဘိတ်နေ့ကအပြီးအရာဖြစ်ပါသည်, ယဇ်ပုရောဟိတ်များနှင့်ဖာရိရှဲတို့၏ခေါင်းဆောင်များအတူတကွပိလတ်မင်းထံသို့ ဝင်.,
27:63 ဟုဆို: "သခင်, ကျွန်တော်ဒီ seducer ဟုနျုအောကျမေ့, သူအသက်ရှင်သေးခဲ့စဉ်, '' သုံးရက်ပြီးနောက်, တဖန်ငါထမြောက်ကြလိမ့်မည်။ ''
27:64 ထို့ကြောင့်, သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌သည်အထိစောင့်ခံရဖို့သင်္ချိုင်းတော်ကိုအမိန့်, ဖြစ်ကောင်းပည့်တော်တို့ကသူ့ကိုလာခိုးစေခြင်းငှါ စိုးရိမ်., နှင့်လူများတို့အားပြောလော့, '' သူက။ သေခြင်းမှထမြောက်တော်မူပြီ '' ဤနောက်ဆုံးအမှားကပထမဆုံးထက်ပိုဆိုးပါလိမ့်မယ်။ "
27:65 ပိလတ်မင်းသည်ထိုသူတို့အားပြောဆို: "သင်တစ်ဦးအစောင့်များ. Go ကို, သငျသညျပုံကိုသိအဖြစ်ကစောင့်ရှောက်လော့။ "
27:66 ထိုအခါ, ထွက်သွားရာ, သူတို့အစောင့်နှင့်အတူသင်္ချိုင်းတော်ကိုအလုံခြုံ, ကျောက်ကိုပိတျထားသော.